သက်ဝေ Tue Dec 07, 09:18:00 AM GMT+8
စောစောစီးစီး ဖတ်ပြီး တခွိခွိရယ်သွားတယ်...
ကော်ဖီဖျော်စက်... ကော်ဖီဖျော်စက်... ... ...
ZT Tue Dec 07, 09:31:00 AM GMT+8
ကျွန်တော့် ခုံကိုတော့ မန်နေဂျာကိုယ်တိုင် ရွေးပေးထားတာ။ အကြောင်းသိ တွေမို့။ ပထမတစ်ခေါက် ခုံပြောင်းထိုင်မယ် ဆိုတုန်းက ဒီနေရာက မင်းကွန်ပျူတာကို လူတစ်ကာ မြင်ရတယ်။ မပြောင်းနဲ့ ဆိုပြီး ပြီးမှ ချောင်ကောင်းတဲ့ နေရာ သူကိုယ်တိုင် ရွေးပေးထားတာ။ :D
Ko Boyz Tue Dec 07, 09:38:00 AM GMT+8
အောင်မယ် ကျန်း ကျန်း... နေရာအသစ်မှာစောစောစီးစီး ပို့စ်တွေ တင်နေပြီပေါ့လေ။
မသိရင် စောစောစီးစီး အလုပ်လုပ်တယ် ထင်နေရတာ...။
ဝေါင်းဆိုလို့ တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ လုပ်နေသလားထင်နေတာ...။
ခြင်္သေ့ကို သွားတိုက်ပေးတဲ့ အလုပ်လားဟင်....။
ဒဂယ်မသိလို့ပါ။ သရီးအင်ဝမ်းထည့်ဖျော်ရင် ကော်ဖီစက်က ပျက်တတ်လားဟင်... အိမ်က စက်ကို လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမှ (ကိုယ့်ဟာ မဟုတ်... သများဟာ.. တစ်ခါထည့်ထားရင် တစ်ပတ်လောက်ကို ကိုယ်တော်က မဆေးပဲ ပစ်ပစ်ထားလို့...။ )
လင်းခေတ်ဒီနို Tue Dec 07, 10:06:00 AM GMT+8
သေချာတာကတော့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ဒီပို့စ်လေး လင့်မတက်လာတော့တာပဲ ဒါနဲ့ပဲ ခုလေးတင်ပြောင်းလိုက်တယ် ပလုံ ကနဲဆို တက်လာရေား))))))
မြူးမြူး Tue Dec 07, 10:41:00 AM GMT+8
မမနေရာလေးက တကယ်ကိုကောင်းတာကိုး.. ညီမရဲ့ ရုံးက စားပွဲလေးကလဲ နေရာကောင်းပဲ နောက်မှာနံရံပဲရှိတော့တယ်.. ဘေးမှာတော့ မှန်ကြီးနဲ့ကာထားတာ.. ဘယ်ရမလဲ wall paper ကပ်ပြီး ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်.. မှတ်ကရော.. ဒါနဲ့ လင့်အသစ်ယူသွားတယ်နော်.. စိတ်ဆိုးနဲ့.. :)
ညီမလေး Tue Dec 07, 11:24:00 AM GMT+8
ချစ်ချစ်နော် ...အပြောင်းအလဲတွေ သိပ်များဒယ် ဒါပေမဲ့ ပြောင်းတိုင်းမကောင်းတာတွေလဲ ရှိတယ်ဗျး)
စကားမစပ် . .. အဲ့လိုမြင်ကွင်းလေတွေ မြင်ရတော့လဲ အလုပ်လုပ်ကြည့်ချင်သားး)
Anonymous Tue Dec 07, 11:37:00 AM GMT+8
Anonymous Tue Dec 07, 01:05:00 PM GMT+8
ဝေါင်းးးးးးးးးး... အဲ ယောင်လို့...
ရှုးတိုးတိုး ဘလော့ဂ်ဂါလို့ သူတို့မသိစေနဲ့...
မောင်မိုး Tue Dec 07, 01:36:00 PM GMT+8
ဂွင်ကောင်းတယ်...အရက်ခိုးသောက်လို့ကောင်းမယ့်နေရာပဲ..ခစ်.ခစ်..လင့်ပြောင်းချိတ်ထားပါတယ်။ တစုံတယောက်ပေးတဲ့ဒုက္ခပေါ့။ ဘလော့စပေါ့ကိုဖွင့်..လင့်ကိုပြောင်းချိတ်...ဒီမနက်က ကော်နက်သေဖြစ်နေတာ...တော်တော်ကြိုးစားချိတ်လိုက်ရတယ်။ ပျော်နိုင်သူတွေ ပျော်ကြပါစေ...။
An Asian Tour Operator Tue Dec 07, 01:46:00 PM GMT+8
ဂစ်ဂစ်ဂစ်.. အရမ်းငိုက် လို့ကောင်းမယ့်နေရာလေးပဲ။
ဂစ်ဂစ်ဂစ်.. တချိန်လုံး ဖေ့ဘွတ်တို့ဘလော့ တို့ဖတ်လို့ရတဲ့နေ့ရာလေးပဲ။
ဂစ်ဂစ်ဂစ်.. ဘလော့စပေါ့ ကနေ ဒေါ့ကွမ်းပြောင်းသွား တာမိုက်တယ်။
ဂစ်ဂစ်ဂစ်.. ကော်ဖီ ဖျော်စက် ကို ဖျက်ဆော် လိုက်တာ ရယ်ရတယ်။
*ဂစ်ဂစ်ဂစ် = ဂဠုံ ကျွန်းက ဂဠုံ တွေအော်သလို အော်သံ
Anonymous Tue Dec 07, 02:56:00 PM GMT+8
ကုလားထိုင် လာလုမယ် နေရာကောင်းလို့ မထတန်းထိုင်မနေနဲ့အုန်းနော် အချိန်တန်ရင် ဖယ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အသိရှိတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်
ဒေါ့ကွန်း ပြောင်းချိတ်ထားမယ် အခုတော့ပေါ်နေသေးတယ်
Phyo Maw Tue Dec 07, 04:16:00 PM GMT+8
အနော့်နေရာနဲ့ တောတော် ဆင်တယ်။
အတွင်းဆုံး ဒေါ့ခုံ XD
လသာည Tue Dec 07, 04:55:00 PM GMT+8
မမချစ်ထိုင်ခုံက အကျယ်ကြီးပဲ။ သဘောကျတယ် လူလစ်ပြီး အားတဲ့အခိုက်ဆို ကောင်းကောင်းမှောက်အိပ်လို့ ရမလားပဲနော်း))
Anonymous Tue Dec 07, 05:11:00 PM GMT+8
Same like my seat,,,:)
ဇွန်မိုးစက် Tue Dec 07, 05:54:00 PM GMT+8
ခုထိတော့ ပေါ်နေသေးတယ် အမချစ်။း)
ဇွန့်နေရာက ရှယ်လေ။ အနောက်မှာ မန်နေဂျာနဲ့ စူပါဗိုက်ဇာ၊ ဘေးမှာက စီနီယာ။ :D
ကလူသစ် Tue Dec 07, 08:37:00 PM GMT+8
နေရာလေးက ဂွင်တည့်လေတော့ ဖဘတို့ ဘလော့ဂ်တို့မှာတော့ မျက်စိနောက်အောင် မြင်ရအုန်းတော့မယ် :P
မြသွေးနီ Tue Dec 07, 10:59:00 PM GMT+8
မြသွေးလည်း ထိုနည်း၎င်း၊ ထိုနည်း၎င်း ရုံးအသစ်ကို ပြောင်းရပေဦးမည်။
လောလောဆည်တော့ ရုံးအဟောင်းက အရှုပ်ထုတ်တွေ အရင်ရှင်းနေရသည်။
မချစ် ဒေါ့ကွန်းလေးကိုလည်း ပြောင်းချိတ်ထားပါသည်။
အဲ..အခုကွန်မန့် ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ရွှေပြည်ကြီးမှာ မန့်မရသမို့
ချော..ရဲ့ အကူညီကိုယူကာ မန့်ချင်လွန်းသဖြင့် မန့်လိုက်ရပါသည် ချစ်အစ်မရေ..။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Tue Dec 07, 11:18:00 PM GMT+8
အစ်မတို့ရုံးခန်းက ညီမရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရုံးခန်းနဲ့တော်တော်လေးတူတယ်.. ခုတော့ မရှိတော့ပါဘူး
ပုံစံလေးက ဆင်တော့ သိပ်ကိုသတိရသွားမိတယ်..
ပြီးတော့ အစ်မရဲ့ နေရာလေးက မိုက်တယ်နော် ရှယ်ဘဲ
ညီမတော့ အိပ်ချင်ရင် ခုံအောက်လေးထဲ ၀င်ခွေနေလိုက်ချင်တယ် ဟိဟိ
ရုံးခန်းအသစ် .com အသစ်လေးနဲ့ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေစွာ စာတွေလည်းရေးနိုင်ပါစေ အလုပ်တွေလဲ အဆင်ပြေပါစေအစ်မရေ...
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Wed Dec 08, 12:18:00 AM GMT+8
အိမ်သစ်တက်ပွဲ တစ်ခုခုတော့ ကျွေးအုံးလေ အမ ... :P
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Wed Dec 08, 02:30:00 AM GMT+8
ခုံအောက်ဝင်အိပ်ဖို့ အကြံပေးတဲ့သူက ပေးနေပါလား..
ဒီမှာဖြင့် ဓမြဂိုဏ်းထောင်ဖို့ အစည်းအဝေးခန်းမရပြီဆိုပြီး ကျေနပ်နေတာ..
အင်ကြင်းသန့် Wed Dec 08, 12:58:00 PM GMT+8
ဂျင်းလည်း ဒီတစ်ပတ်ကစပြီး ရုံးပြောင်းရတယ်....နေရာကတော့ကောင်းသလားမမေးနဲ့ မန်နေဂျာတွေအားလုံးက ပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းပြီး ဂျင်းက အလည်ခေါင်တည့်တည့်မှာလေ....
နဂိုကမှအလုပ်တွေများလို့စာမရေးဖြစ်ပါဘူးဆို အခုတော့ ဒီလိုနေရာမှာထိုင်ရတာ ဘာမှလုပ်လို့ကိုမရဘူး....ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးဖြစ်ပြီထင်ပါရဲ့
ကြည်ကြည် Wed Dec 08, 03:39:00 PM GMT+8
ရုံးစာပွဲ ကိုကြည့်ပီး လေသွားတယ် သိလား
ကြည်ကြည်နေတဲ့ အခန်းထက်ကျယ်မလားပဲး(.......
mysterysnow Wed Dec 08, 05:57:00 PM GMT+8
ZZZ Wed Dec 08, 08:59:00 PM GMT+8
အမလေးရဲ့ ရုံးခန်းက မီးချောင်းတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ရုံးနဲ. building တစ်ခုတည်း လားလို.တောင် ထင်မိပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ အပေါ်က အဲယားကွန်း လေ၀င်ပေါက်ကမတူပါဖူး ၊ စလုံးက ရုံးခန်းတွေက အများအားဖြင့် မီးအိမ်စလောင်း ပုံစံအတူတူပဲ ထင်ပါရဲ့ ၊
အမလေးရဲ့ စားပွဲက privacy ရှိတဲ့နေရာမှာ ဆိုတော့ လူလစ်ရင်ပို.စ်ရေး ၊ ကွန်မန်.ရေးပေါ့ ၊ ကျွန်တော်လည်း ရုံးမှာလစ်ရင်လစ်သလို ဘလော့တွေလျောက်လည် ၊ ကွန်မန်.တွေရေး ၊ ပျော်စရာကြီး ...
JUSTICE999BURMA Thu Dec 09, 12:26:00 AM GMT+8
.com ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့လာကြည့်သွားတယ်...
အဖြူရောင်နတ်သမီး Thu Dec 09, 04:56:00 AM GMT+8
တကယ်ပါ ဘလော့ဂ်တွေ သွားဖတ်လို့ ကျမလင့်ခ် ချိတ်မထားရင် သိတ်ငိုချင်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ အမျိုးမို့ပါ။...